သူတည်းတစ်ယောက် ကောင်းရာရောက်ဖို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သူတည်းတစ်ယောက် ကောင်းရာရောက်ဖို့
Posted by Ko chogyi on May 11, 2013 in Creative Writing | 24 comments
အခုတစ်လော ရာသီဥတုကပူပြင်းလို့ ကျွန်တော်အမေ အစားအသောက်တွေသိပ်မစားလို့ အားပြတ်မှာ စိုးရိမ်တဲ့အတွက် Royal Nest တံဆိပ် ငှက်သိုက် ၀ယ်တိုက်ရပါတယ်။ အမေကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ အစား မစားရင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာစိုးလို့ပါ။ ငှက်သိုက်သောက်ပြီး အမေလည်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာမိ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငှက်သိုက်အားဆေးပုလင်းကိုကြည့်ရင်း မိမိအသွေးအသားနဲ့ အသိုက်တည် ဆောက်ကြတဲ့ ဇီဝဇိုးငှက်ကလေးတွေအကြောင်း တွေးမိ လိုက် ပါတယ်။
ဇီဝဇိုးငှက်အမျိုးအစား(၉)မျိုးခန့်ရှိပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ကျင်လည်ကျက်စားနေတဲ့ ဇီဝဇိုးငှက်အမျိုးအစား (၃)မျိုးခန့်သာရှိပါတယ်။ အဖြူရောင်အသိုက်ဆောက်သောမျိုး၊ အမဲရောင်အသိုက် ဆောက်သောမျိုးနဲ့ မြက်သိုက်ဆောက်တဲ့မျိုးဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ကမ်းရိုးတန်းကျွန်းစုများမှာ သဘာဝ အသိုက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ မိမိသဘောဆန္ဒအလျှောက် လူနေအိမ်များမှာ ၀င်ရောက် အသိုက်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံနည်းပညာဖြင့် အသံတုပြုလုပ်ပြီး အသိုက်ဆောက်လုပ်စေခြင်းဆိုပြီး လည်းရှိပါတယ်။ အဖြူရောင်အသိုက်ဆောက်တဲ့ ဇီဝဇိုးငှက်တွေဟာ ဒီဇင်ဘာလလောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းရိုးတန်းကို ၀င်ရောက်လာပြီး အသိုက်ဆောက်ကာ မေလလောက်မှာ ဥချ၊ သားပေါက်လေ့ရှိပြီး ဇူလိုင်လလောက်မှာ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဆီကိုပြန်ထွက်သွား တယ်ဆိုတာ မခန့်မှန်းနိုင်ပါဘူး။ ငှက်သိုက်အဖြူကို တစ်နှစ်မှာ (၃)ကြိမ်လောက်ဆွတ်ခူးရနိုင်ပြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ပထမပတ်နှင့် မတ်လပထမပတ်မှာ တစ်ကြိမ်၊ မတ်လနောက်ဆုံးပတ်နှင့် ဧပြီလဒုတိယပတ်မှာတစ်ကြိမ်နဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဇီဝဇိုးငှက်များ ဥဥ သားပေါက်ပြီး ဇီဝဇိုးသားပေါက်များ ပျံသန်းနိုင်ချိန်နောက်ပိုင်း ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်မှ ခူးဆွတ်ကြပါတယ်။ ဇီဝဇိုးငှက်(အဖြူသိုက်)အနေဖြင့် တစ်ခါဥလျှင် (၂)လုံးဥပြီး၊ နှစ်ပတ်ခန့်ဝပ်ပြီးပါက အကောင်ပေါက် လေ့ရှိပါတယ်။ ဥဥ၊ သားပါက်ချိန်ကို ရက်(၆၀)ခန့် သတ်မှတ်ထားပြီး ၄င်းကာလတွင် ငှက်သိုက်ခူးခြင်းလုပ်ငန်း ရပ်နားထားလေ့ရှိပါတယ်။
ဇီဝဇိုးငှက်(အမဲသိုက်)များမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းအတွင်းမှာသာ နေထိုင်လေ့ရှိပြီး တစ်ခြားသို့ ထွက်ခွာပျံသန်းလေ့မရှိကြပါဘူး။ ဇူလိုင်လမှနိုဝင်ဘာလအတွင်း ငှက်သိုက်ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ စက်တင်ဘာလပထမပတ်နှင့် နိုဝင်ဘာလ နောက်ဆုံးပတ် နှစ်ကြိမ်သာ ဆွတ်ခူးရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥ ဥလျှင် တစ် ကြိ်မ်တစ်လုံးသာ ဥလေ့ရှိပါတယ်။ မြက်ငှက်သိုက်အမျိုးအစားမှာ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်နိုင်မှုရာနှုန်းနည်းပါးလွန်း သဖြင့် ဈေးကွက်မ၀င်ပေ။
ဇီဝဇိုးငှက်တွေဟာ ပါးစပ်ကိုဟပြီးပျံသန်းလေ့ရှိပြီး၊ အင်းဆက်ပိုးများကို အဓိကစားသုံးကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်းတွင် ငှက်သိုက်ကို စီးပွားဖြစ်ဆွတ်ခူး ရရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေက-
(၁) လောင်းလုံမြို့နယ်၊ မော်စကိုကျွန်းအုပ်စု။
(၂) ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ ရေအေးကျွန်းအုပ်စု။
(၃) ကော့သောင်းမြို့နယ်၊ ကော့ငှားနဲ့ ကဆိုင်းလှအုပ်စု။
(၄) ပုလောမြို့နယ်၊ မလိကျွန်းအုပ်စုတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မလိကျွန်းအုပ်စုနဲ့ ကော့ငှား၊ကဆိုင်းလှ အုပ်စုတွေက ငှက်သိုက်အများဆုံးရရှိနိုင်ပြီး ကျန်အုပ်စုနှစ်ခုက အနည်းငယ်သာ ရရှိပါတယ်။ ငှက်သိုက်အခုရေ ပျှမ်းမျှ ၁၆၀ တွင် တစ်ပိသာခန့်ရှိပြီး ငှက်သိုက်အဖြူတစ်ပိသာ လျှင် နှစ်သိန်းငါးသောင်းကျပ်ခန့်နှင့် ငှက်သိုက်အမဲတစ်ပိသာ ငါးသောင်းကျပ်ခန့် ဆွတ်ခူးခရရှိပါ တယ်။ ဈေး ကွက်အတွင်းရောက်ရှိသွားချိန်တွင် ငှက်သိုက်အဖြူတစ်ပိသာလျှင် အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ကျပ်သိန်း ၄၀ မှ ၈၀ ခန့်ထိရရှိနိုင်ပြီး၊ ငှက်သိုက်အမဲ တစ်ပိသာလျှင် လေးသိန်းခန့်သာရရှိပါတယ်။ ဇီဝဇိုးငှက်သိုက်ကို သန့်စင် ပေါင်းတင်ပြီး ဆေးအဖြစ်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်ပါတယ်-
(၁) သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ခွန်အားကိုဖြစ်စေပါသည်။
(၂) အဆုတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါသည်။
(၃) ကျန်းမာရေးမကောင်းပြီး အဟာရလိုအပ်သူများ အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
(၄) အသားအရည်စိုပြေပြီး၊ အရွယ်တင်နုပျိုလျှက်၊ အမြင်အာရုံကောင်းစေပါသည်။
(၅) ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် အဟာရအထောက်အပံ့များစွာရရှိနိုင်ပါသည်။
ဇီဝဇိုးငှက်ကလေးတွေဟာ ဥဥရန်၊ သားပေါက်ရန်နဲ့ ရင်သွေးငယ်လေးတွေ လုံခြုံစွာခိုလှုံနိုင်ရန် အသိုက် ဆောက်လုပ်ရာမှာ စားထားတဲ့ အစာအဟာရတွေ ကို ပြန်အံထုတ်ပြီး ပြုလုပ်ကြရပါတယ်။ အချို့ အသိုက်တွေမှာဆိုရင် သွေးတွေပါအံထွက်ပြီး သွေးကြောမျှင်လေးတွေပါဝင်တဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတို့ အဟာရ ဖြစ်စေရန်၊ ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးစေရန်နဲ့ အရွယ်တင်နုပျိူစေဖို့အတွက် ဇီဝဇိုးငှက်ကလေးများရဲ့ အသွေးအသား နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ငှက်သိုက်တွေက အဓိကဖြစ်နေပါ တယ်။ ဇီဝဇိုးငှက်ကလေးတွေ က လူသားတို့အတွက် အနစ်နာခံနေရတာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် သူတည်းတစ်ယောက် ကောင်းရာရောက်ဖို့ သူတစ် ယောက်မှာ ပျက်လင့်ကာ သား ဓမ္မတာတည်းဆိုတဲ့ လင်္ကာလေး ကြားယောင်မိပါတယ်။
Ko chogyi has written 32 post in this Website..
View all posts by Ko chogyi →
အဲဒီ လင်္ကာလေးက တကယ်မှန်တယ်နော်…။
ဒီက တရုတ်ပရဆေးဆိုင်တွေမှာတော့ ငှက်သိုက်ကို မှန်ပုံးနဲ့ထည့်…
စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာတော့ ကြက်သား (Black Chicken)နဲ့ ရောပေါင်းပြီးရောင်းတယ်…
၀င်ရောက်ဖတ်ရှုအားပေးတဲ့ လုင်ပျို၊ ကိုကြီးကျောက်၊ အန်ကယ်ကြီးတို့ကျေးဇူးပါ။
အန်ကယ်ကြီးစာချိုးမဖျက်နဲ့လေ၊ တစ်ခါတစ်လေအသိုက်လုပ်ဖို့ အန်ရင်း၊ အသိုက်အသစ်လုပ်
ရင်း သွေးအန်ပြီး သေသွားရတဲ့ ငှက်ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။
ငှက်သိုက် အဲ့လို ပုလင်းတွေက မစစ်တတ်ဘူး.. ဟိုရောဒီရော ဖြစ်တတ်တဲ့ အပြင် ဓါတုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပါ တတ်တယ်လို့ ကြားဖူးတယ်..
ဥပမာ အအေးသောက်ရင် ပင်ပွားဆေးကုလားမ နဲ့ ကျောက်ကျော သောက်ဖူးကြမှာပါ.. အဲ့ဒီ အထဲက ဆေးကုလားမ ရဲ့ အသွင်ပုံစံက ငှက်သိုက် ချက်ထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ်နေလို့ အဲ့ဒါတွေရောတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
စိတ်ချရအောင် တရုတ်တန်းမှာ ငှက်သိုက် ၁၀သားလောက် ၀ယ်ပြီး တခါပြုတ်ရင် ၁ခု ၂ခုလောက် ကို ရေအရင်စိမ်ထားပြီး ရေပွတဲ့ အခါ ဇာကနာ အချွန်ကလေးနဲ့ ငှက်မွေးကလေးတွေ ကောက်ပြီး အဖတ်ကလေးတွေ သီးသန့်ဆယ်ပြီးတော့ အိုးထဲ ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီး ရေထည့်ထားတဲ့ အိုးထဲမှာ ပေါင်းသင့်ပါတယ်။ ကြာကြာပေါင်းရင်တော့ အကုန် အရည်ပျော်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အလွန်ဆုံး မိနစ် ၂၀လောက်ပဲ ပေါင်းပါ။
ပြီးရင်တော့ စားကောင်းအောင် သကြားကလေး နည်းနည်း ထည့်ပြီး ခေါက်စားလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
အဘိုး ကျန်းမာရေး မကောင်းတုန်းက လုပ်ကျွေးခဲ့တာလေး ကို သတိရလို့ ပြန်ရေးပေးလိုက်တာပါ။
အဘိုးဆုံးတော့ ငှက်သိုက်တွေ ပိုနေလို့.. စားဖူးတယ် ရှိအောင် စားမယ် ဆိုပြီး ဆူး တို့ မောင်နှမ တွေ ငှက်သိုက်တွေ နို့ပူတင်း လုပ်တဲ့ အထဲ ထည့်လုပ်ပြီး စားလိုက်ကြပါတယ်။
စားပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ မနေနိုင်လောက်အောင်ကို အရမ်းအိပ်ချင်ကြပြီး တော်တော် အားပြည့်သွားသလို ခံစားရတယ်။
အသက်ကြီးတဲ့ လူတွေ အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ အိပ်ကောင်း စားကောင်း ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာလာမှာ ဖြစ်မယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ထင်မိတယ်။
ကော့သောင်းဘက်မှာ သွားဝယ်ရင်တောင်မှ တစ်ကျပ်သားကို တစ်သိန်းကျော်ပေးရတယ် ..
ငှက်သိုက်တစ်ဖတ်ကို ရေစိမ်ပြီး အမွှေးနှုတ်ပြီး ပေါင်းရင်တောင်မှ brand ငှက်သိုက်ဗူး ၅ ဗူး စာလောက်ရတာမို့လို့ ကိုယ်တိုင်ပေါင်းစားရတာ ပိုတန်ပါတယ် ..
၂ဖတ်လောက်ဆို တော်တော် လွန်သွားမှာပေါ့နော်.. ဆူး တို့ မောင်နှမတွေ.. ၄ယောက်လောက် နို့ နဲ့ကြက်ဥရောပြီး ပူတင်း လုပ်စားလိုက်တာ.. ခေါင်းတောင် မထောင်နိုင်ဘူး အိပ်ချင်လိုက်တာ လွန်ပါရော.. ထင်တော့ ထင်သားပဲ.. လက်လွန်သွားတယ်လို့.. ဟိဟိ
ရန်ကုန်မှာ ကျွန်းငှက်သိုက်က တကျပ်သားကို ၁၂ သိန်းတဲ့။ ကုန်းငှက်သိုက်က တကျပ်သား ကို ၈ သိန်းတဲ့။ ဘုရားတပြီးပြန်လာရတယ်။ ကော့သောင်းကမှာ ရင်တော့တော်တော် တန်တာပဲ။
ကိုချို့ ရဲ့ အတွေး ကို ဟိုဘက်က ပြောခဲ့တဲ့ Research နဲ့ တွဲပြီး ဆက်တွေး မိတယ်။
ဆေးပညာမှာလူတွေ ကို အသက်ကယ် ဖို့ တိရိစ္ဆာန်အသက်လေးတွေ ရင်းပြီ စမ်းသပ်ရတယ်။
အဲဒါကို မလုပ်သင့်ဘူး လို့ တားမြစ်ဆန္ဒပြသူတွေလဲ အများကြီးဘဲ။
တစ်ခါက ဆို Research ရုံး တစ်ရုံး ထဲ က ဝန်ထမ်းတွေကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် အနှောက်အယှက်ပေးတာ သတင်းထဲဖတ်ရဖူးတယ်။
ပြောရရင် သာမာန် အချိန်မှာတော့ ဒီတိရိစ္ဆာန်လေးတွေလဲ သူတို့ အသက်ကို နှမြောမှာဘဲ လို့ တွေးမိပါတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် (ဒါမှမဟုတ်) ကိုယ့်ဆွေမျိုးရင်းချာ အတွက် ရောဂါပျောက်အောင်ကုဖို့ ဆေးတွေ လိုလာချိန်မှာ ဒီ တိရိစ္ဆာန်အသက်လေးတွေ ကို နှမြောနေ နိုင် ဦးမလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလဲ အမြဲရှိတယ်။
ဒီလို ကိစ္စမျိုး မှာတော့ လူအသက် ကို ပိုပြီး တန်ဖိုး ရှိတယ် ယူဆပြန်မှာမဟုတ်လား။
အဲဒီလိုအချိန်မှာတော့ ဒီတိရိစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ ဒီလို ရင်းပြီး လူအသက်တွေ ကယ်နိုင်တာမို့ သူတို့ လဲ ကောင်းရာမွန်ရာ ပိုပြီး မြင့်တဲ့ဘဝ မှာ ရောက်သွားပါစေ ဆုတောင်းမိတာ။
အတိတ်ဘဝတွေ၊ နောက်ဘဝတွေကို ဖယ်ထားသင့်တယ် မဟုတ်လားလို့။
မရင့်ကျက်နိုင်သေးတဲ့ ဘဝ မှာ တော့ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ့်စိတ်ကို ဖြေ နိုင်ဖို့ အတွက်
သက်သေမပြနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေကို ဆွဲထည့်ရတော့ပါဘဲ။
ဒီတော့ လူ့ဘဝ မှာ လက်တွေ့ပြနိုင်တဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ Research တွေကို အရေးတစ်ကြီး လုပ်နေသင့်သလိုဘဲ
(မရင့်ကျက်သေးတဲ့)လူတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖေးမ ဖြေသိမ့်နိုင်မဲ့ စိတ်ပညာရပ် တွေကလဲ အရေးပါနေတာတွေ့နိုင်ပါရဲ့။
ဒီတော့ Research တွေဟာ လူသား အကျိုးမဲ့ ဖို့ မဟုတ်ဘဲ လူသားအကျိုးပြု ပိုပြီးဖြစ်သင့် သလိုဘဲ
ဘာသာရေးဆိုတာဟာ လူတွေကောင်းကျိုးကိုဆောင်ပေးမဲ့ စိတ်ပညာရပ်ဖြစ် လာသင့်ပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ ဖက်ကို ရောက်နေတဲ့ Research နဲ့ ဘာသာရေး ကတော့ လူတွေအတွက် အင်မတန်ကြီးတဲ့ အန္တရာယ် ဆိုတာ မြင်နိုင်ကြကောင်းပါရဲ့။
ဒီလို အတွေးများများ ဖြည့်ပေးတဲ့ Post လေးအတွက် ကျေးဇူးပါကိုချို ရေ။
“သူတည်းတစ်ယောက်၊ ကောင်းဖို့ရောက်မူ၊ သူတစ်ယောက်မှာ၊ ပျက်လင့်ကာသာ၊ ဓမ္မတာတည်း။”
လောကမှာ.. Win-Win အခြေအနေဖန်တီးနိုင်တာအများကြီးပါ…
အနန္တသူရိယအမတ်ကြီးက..ဘုရင်(နရပတိစည်သူမင်း) ကို.. (သီးသန့်)ဦးတည်…. ချော့ရေးထားသာတာဖြစ်တယ်ထင်ပါကြောင်းနဲ့.. ဘုရင်လည်းသူတွေးထင်တဲ့အတိုင်း”အမျက်တော်ပြေလို့.. ပြန်လွှတ်စေ”လုပ်ခဲ့ပါကြောင်း..
သူတည်းတစ်ယောက် ကောင်းဖို့ရောက်မူ ၊သူတစ်ယောက်မှာ ပျက်လင့်ကာသာ ဓမ္မတာတည်း …
ရွှေအိမ်နန်းနှင့် ကြငှန်းလည်းခံ မတ်ပေါင်းရံလျက် ၊ပျော်စံရိပ်ငြိမ် စည်းစိမ်မကွာ မင်းချမ်းသာကား ၊
သမုဒ္ဒရာ ရေမျက်နှာထက်ခဏတက်သည့် ရေပွက်ပမာ တစ်သက်လျာတည်း …
ကြင်နာသနား ငါ့အားမသတ် ယခုလွှတ်လည်း ၊မလွတ်ကြမ္မာ လူတကာတို့ခန္ဓာခိုင်ကျည် အတည် မမြဲ ဖေါက်လွှဲတတ်သည် ၊
မချွတ်စသာ သတ္တ၀ါတည်း …
ရှစ်ခိုးကော်ရော် ၊ ပူဇော်အကျွန် ပန်ခဲ့တုံ၏ ၊ခိုက်ကြုံ ဝိပါက် သံသာစက်၌ ၊ကြိုက်လတ်တုံမူ တုံ့မယူလို ၊
ကြည်ညိုစိတ်သန် သခင်မွန်ကို ၊ချန်ဘိစင်စစ် အပြစ်မဲ့ရေး ခွင့်လျှင်ပေး၏ ၊
သွေးသည် အနိစ္စာ ငါ့ခန္ဓာတည်း … …
အနန္တသူရိယအမတ်ကြီး (မြန်မာသက္ကရာဇ် ၄၇၃ – ၅၃၅)
Healing Powers of Birds’ Nest Soup Remain Mysterious
Date: 11 July 2012 Time: 03:09 PM ET
At as much as $4,500 per pound, edible birds’ nests are among the most expensive foods on the planet.
Science cannot yet explain the healing powers attributed to the soup, they conclude. Birds’ nests “bioactivities and medicinal value are still open to question as there (is) not much scientific research on the medicinal properties,” Fucui Ma and Daicheng Liu of Shandong Normal University in China write inareview article to be published in the October issue of the journal Food Research International. .
Swiftlets live in limestone caves around the Indian Ocean, in South and South East Asia, North Australia and the Pacific Islands. Males primarily build the nests, attaching them to the vertical walls of the caves. Removing them can be dangerous and painstaking work, and, depending on the type of nest, it can take one person eight hours to clean 10 nests, the researchers write. [Amazing Caves: Photos of Earth’s Innards]
For possibly 1,200 years, the Chinese have prepared and eaten the nests asasoup. The nests are considered to haveahigh nutritional and medicinal value, believed to have everything from anti-aging and anti-cancer properties to the ability to improve concentration and raise libido.
Protein is the most abundant constituent of the nests, which contain all of the essential amino acids, the building blocks out of which proteins are made. They also contain six hormones, including testosterone and estradiol, the researchers write.
The nests also contain carbohydrates, ash andasmall quantity of lipids (naturally occurring molecules that include fats). Previous research has indicated that the nests contain substances that can stimulate cell division and growth, enhance tissue growth and regeneration, and that it can inhibit influenza infections.
But not everyone reacts well to them. Birds’ nests are known to cause anaphylaxis,alife-threatening allergic reaction.
Little research has been carried out on their biological function so far, and more is needed to better understand the qualities attributed to them, they conclude.
Follow Wynne Parry on Twitter @Wynne_Parry or LiveScience @livescience.
ငှက်သိုက်ကောင်းကျိုးကတော့ လူမမာတွေအတွက် အတော် သိသာပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဓာတ်ကင်ထားတဲ့လူတွေ၊ ကီမိုသွင်းတဲ့လူတွေဆိုရင် ၀မ်းတွင်းက ပူပြီး မစားနိုင်မသောက်နိုင်ဖြစ်ရင် ငှက်သိုက်သောက်ပေးရပါတယ်။
ငှက်သိုက်ကိုလည်း အအေးခံပြီး သောက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ရေခဲသေတ္တာထဲထည့် အအေးခံပြီးမှ သောက်ပါ။
တချို့ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်ဆိုပြီး မြွေပွေးသွေးသောက်ရမယ်ဆိုပြီး မြွေအရှင်ကို လည်လှီးပြီး သောက်တာမျိုးတွေ၊ အကောင်အရှင်တွေကို ချက်စားတာမျိုးတွေလုပ်တာထက်စာရင်တော့ ငှက်သိုက်သောက်တာကို သူတည်းတစ်ယောက်ကောင်းရာရောက်ဖို့လို့ ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစရာ မရှိလောက်ပါဘူး။
ငှက်သိုက်အခြောက်ကို ကိုယ်တိုင်သန့်စင်ရတာ အလုပ်ရှုပ်ပြီး ပိုပင်ပန်းလို့ လူနာရှိရင် ပေါင်းပြီးသားကို ၀ယ်သောက်ရတာ ပိုအလုပ်ဖြစ်တယ်။
ပါဝါပလပ်စ်က ပြည်တွင်းက လုပ်ငန်းရှင်လုပ်တာမို့ (ကိုယ်နဲ့လည်း သိလို့) ငှက်သိုက်လည်း စစ်တယ်၊ အရည်လည်းမများပဲ ငှက်သိုက်များတာမို့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို ညွှန်းပေးလေ့ရှိတယ်။ :hee:
ဆူး အသိ တယောက်ဆို မြွေပွေး သည်းခြေ မြိုချ လိုက်တာ.. အပူအခိုးတွေ အရမ်းလှိမ့်ထွက်လာပြီး ၄ရက်လောက် မျက်စိတောင် မမြင်တော့ဘူး။ ဆရာဝန်ကို သည်းခြေမြိုပြီး ၂ရက်လောက်နေတော့ သွားပြတော့ နောက်ထပ် ၂ရက်နေရင် ကောင်းလိမ့်မယ် ပြောပြီး ၅ရက်နေတော့ ပြန်မြင်သွားတယ်တဲ့.. ဒါပေမဲ့ အအေးဒဏ် အရမ်းခံနိုင်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်လောက်က စားထားတာ အခု အထိ နှာစေးချောင်းဆိုးတာ မဖြစ်ဘူး ပြောတာ ကြားမိတယ်။
ဒီဘက်မှာတော့ မြွေဖမ်းမိရင် အသိတစ်ယောက်ဆီကိုချည်း သွားရောင်းကြတယ်။
ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုက သူလည်း မသေပဲတော့ နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ :buu:
သတ္တ၀ါတိုင်း တချိန်မှာတော့ သေလောက်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပြီး သေကြရမှာပါပဲ။
” ငှက်သိုက်ကောင်းကျိုးကတော့ လူမမာတွေအတွက် အတော် သိသာပါတယ် ”
ပြောနေကြပုံအတိုင်းဆိုရင် ငှက်သိုက် က တော်တော် ကောင်းပုံရတယ် ။
ကျုပ်လဲ အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေဆီ သွားရင် ၊ ငှက်သိုက်ဘူး ပဲ ယူသွားတယ် ကိုချိုကြီးရေ
ကျုပ်တို့ ဆီ က လူကြီးတွေ လဲ ငှက်သိုက်သောက်ရကောင်းမှန်း သိလာတာ မင်္ဂလာ တစ်ပါး ပါပဲမို့ လားဗျ
အရင်တုန်းကတော့ ၊ ရှေးလူကြီးတွေခဗျာ ဈေးကြီးလို့ ဆိုပြီး နှမြောပြီး မသောက်ခဲ့ကြရှာဘူးရယ်
ကိုကြီးမိုက်၊ ကိုမောင်ပေ၊ ဆူး၊ မမ၊ အရီး နှင့် ဝေေ၀တို့အားလုံး ကျေးဇူးပါ။
ငှက်သိုက်အစစ်တော့ သိဘူး.. မြန်မာပြည်မှာ ငှက်သိုက်မုန့်တော့ တရုတ်မုန့်ဆိုင်က စားဖူးတယ်.. သိပ်ချိုအိ……
တရုတ်မုန့်ဆိုင်တော့ မသိဘူး.. ကုလားမုန့်ဆိုင်က ဆန်ဂျူး ကို ငှက်သိုက်လို့ ခေါ်သတဲ့.. ချိုအီ နေတာပဲ..
အချက်အလက်လေးတချို့ .. (မူနည်းနည်းကွဲတယ်ခည..) ဖြည့်စွက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ..
အဲ့ထဲက အရေးအသားလေးကတော့ နည်းနည်း ဆိုရှယ်လစ်အမွေဆိုး ကျန်နေသလိုလို .. ဟီးးးး(ကြုံတုံးးး)
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်ကျော်က ကျနော် မြိတ်မှာနေတုန်းကတော့
ကမ်းနားလမ်းက အိမ်တအိမ်က မျက်နှာကျက်မှာ ဇီဝဇိုးငှက်တွေ အသိုက်လာဖွဲ့လေ့ရှိတာ
သွားသတိရတယ်ဗျို့ …။ကမ်းနားလမ်းမပေါ်မို့ တခြားပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်တွေလို ကုန်လှောင်(ပွဲရုံဆန်ဆန်)
သာမန်အုတ်တိုက် တစ်တိုက်ပါပဲဗျ..(ငယ်သေးလို့ သိပ်မမှတ်မိပါ)
ကျောက်ဆောင်အမြင့်တွေမှာပဲ အသိုက်ဆောက်လေ့ရှိတဲ့ ငှက်တွေက ထူးထူးခြားခြား
သူတို့တစ်အိမ်ထဲကို ပဲ မျက်နှာကျက်မှာ လာလာအသိုက်ဆောက်သဗျ..
ဆိုတော့ အလုပ်မပျက်ဘဲ အလကားနေရင်း ၀င်ငွေ ဖြောင့်သပေါ့ဗျာ..။
အဲ့သည်လို လာလာဆောက်နေတာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပြီလို့လည်း သိရတယ်ဗျ..(ဘယ်လောက်ကြာပီလဲကျနော်မသိ)
သို့သော် nothing last forever မို့ ကျနော်တို့ရှိတုန်းကတောင် အနီးအပါးက အိမ်တွေက ငှက်လာအောင်
ဒါမျိုးအသေးစားတွေ လုပ်တာတို့ အနှီအိမ်ရဲ့ ထပ်ခိုးနဲ့ပုံစံတူလုပ် ငှက်အသံ ကို အသံဖမ်း ပြန်လွှင့်ပြီး ငှက်လာအောင်
လုပ်တာတို့ စနေကြပြီဗျ.. အခုတော့ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်ပီလဲ မသိတော့ပါ..။
ပြောရရင် ငှက်သိုက်တန်ဖိုး နားလည်မှု နဲ့ နည်းပညာနဲ့ ဈေးကွက် က ပြည်တွင်းမှာနည်းပါးသေးသဗျ..
(ယပက်လက်ဘက် ပို့ကြတာပါပဲ..) ပြီးမှ တံဆိပ်ကပ် ဗူးသွပ် ပြင်ဆင်ပြီးတာလေးတွေ
ဈေးကြီးပေး ပြန်သွင်းယူကြရတာ… အော်.. ဘွဘွ
ငှက်သိုက် စား-ကောင်းတယ် ဆိုတာက ယပက်လက်ကလည်း တီလုပ်ကြီးဆီက ရတဲ့အမွေခည
ဘာဓါတ်တွေပါတယ် .. ဘာကြောင့်ကောင်းတယ် ဆိုတာတွေ အတိအကျတော့
သူတို့တွေဆီ ရှိမပေါ့ဗျို့ .. ဖတ်ဖူးချင် လေ့လာချင်စမ်းပါဘိဗျာ..